Zere Jet Lag na Viagra, gbakwunyere ụzọ 4 ọzọ iji zere mmetụta dị n'akụkụ nke ịnya ụgbọ elu - Dị mkpa 2022
Zere Jet Lag na Viagra, gbakwunyere ụzọ 4 ọzọ iji zere mmetụta dị n'akụkụ nke ịnya ụgbọ elu
Ọgwụ na-acha anụnụ anụnụ
Mmiri, mmiri, mmiri
Nwee zuru oke ma bịarute n'ìhè
Mee mgbatị ahụ
Na-eme atụmatụ na njem azụmahịa na Bangalore na azụ n'ime nanị ụbọchị isii ma ọ bụ obere? Ọ dị mma, kwadebe onwe gị maka oke ọgwụ jet lag, ebe ọ bụ na a kwenyere na ọ na-ewe ụbọchị zuru ezu iji gbakee maka mpaghara oge ọ bụla gafere. Ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị njem na-ekwu na ọ dịghị ọgwụgwọ maka jet lag - ị na-atachi obi nke ọma na ị nwere ike - ndị ọzọ na-ekwu na obere obere tweaks na nhazi oge gị ga-enyere aka. Yabụ ebe a na-esote otu usoro teknụzụ dị elu gbakwunyere solo Pharma-fix, yana obere ụlọ akwụkwọ ochie, azịza ya dị mfe.
Ugogbe anya Re-Timer na-eji ọgwụgwọ ọkụ na-edozi usoro okirikiri nke ahụ gị. A na-ebute ụda okirikiri gị site na ìhè anyanwụ nke ndị na-anabata foto na-etinye n'ime anya gị. Dị ka o kwesịrị ịdị, mpaghara oge ịwụli elu na-emetụta ụda okirikiri gị yana usoro ihi ụra gị. Na-eyi dị ka iko abụọ ọ bụla, Re-Timer na-emepụta ihe ụlọ ọrụ na-akpọsa dị ka "100% UV-free light" nke nwere ike inye aka dozie ụda okirikiri gị na mpaghara gị ugbu a. Ọ bụ ezie na ha na-ele anya karịa ntakịrị dorky - na ọ bụ ezie na Medical Daily enwebeghị ohere iji nyochaa - Re-Timer yiri ka ọ dị mma maka onye ọ bụla nwere oge, ego ọzọ, na ọchịchọ ịnwale teknụzụ ọhụrụ. (Biko, kwughachi azụ.)
Kwere ya ma ọ bụ na ị kwenyeghị, Viagra nwere ike inye aka na jet lag… ma ọ bụrụ na ị bụ òké, ya bụ. Dr. Diego Golombek na ndị ọrụ ibe ya na National University of Quilmes na Buenos Aires, nyere ọkara hamsters ha dose nke sildenafil (Viagra) wee mee ka ụlọ nyocha ahụ pụta ìhè ehihie / abalị n'oge awa isii. Ndị e nyere dose ahụ edoziziri ka oge na-agbanwe pasent 50 ngwa ngwa. Golombek kwenyere na sildenafil na-arụ ọrụ na molekul a na-akpọ cGMP, nke a maara na ọ dị na ọkwa dị elu n'ụbọchị. N'ụzọ dị ịtụnanya, ọgwụgwọ Viagra na-arụ ọrụ naanị mgbe agbanyere ọkụ n'oge, ọ bụghị n'oge - ndozi otu ụzọ. N'ihi nke a, Golombek na-echepụta usoro dị iche iche na-ebelata ma na-eme ka elekere ahụ dị ngwa. Ọ bụ ezie na emebeghị nyocha ahụ n'ime mmadụ, nyocha Skyscanner nke ndị njem 1,000 chọpụtara na pasent 11 kwuru na ha ga-anwale Viagra dị ka ọgwụgwọ jet lag, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara nke ndị zara ajụjụ ahụ kwuru na ọ rụrụ ọrụ.
Ọ bụ ezie na ị nwere ike ịchọrọ otu iko mmanya ma ọ bụ iko kọfị siri ike mgbe ị na-efe efe na mbara igwe enyi, mmetụta nke mmanya na caffeine na elu elu agaghị enyere gị aka. N'ozuzu, nhọrọ ndị a ga-eme ka ike ọgwụgwụ gị dịkwuo elu, akpịrị ịkpọ nkụ gị, ma ọ bụ usoro ihi ụra gị na-emekarị. Kedu ihe ọṅụṅụ ị kwesịrị ịrịọ n'aka ụgbọ ala kama? Mmiri. N'ozuzu, ikuku dị n'ime ụgbọ elu nwere oke iru mmiri dị pasent 10 ruo 20 ma e jiri ya tụnyere iru mmiri dị n'ime ụlọ nke pasent 30 ruo 65. Ya mere, ọ dị mkpa ịnọrọ mmiri mgbe ị na-efe efe dị ka ihe ngwọta maka ihe niile na-arịa gị. Ọ na-enyekwara gị aka izere ịbụ onye ihe ọṅụṅụ ndị ọzọ na-anwa gị.
Ọ dị ka ọ ga-abụ ihe dị mma ịwụli elu na usoro ọhụrụ gị site n'ịnọgide na-ehi ụra abalị niile tupu ị na-eme njem, mana ndo, nke a anaghị arụ ọrụ maka ọtụtụ ndị mmadụ. Ndị njem na-ekwu na ọ kacha mma ịmalite njem zuru oke nke ọma, ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, iji nweta anya emechi na ụgbọ elu. Globetrotters na-atụkwa aro ka ọ bịarutere n'ụbọchị. Ọtụtụ n'ime anyị, ọbụna ndị anyị na-eme njem na-emekarị, na-enwe obi ụtọ mgbe anyị rutere ebe ọhụrụ, n'ihi ya, ọ kacha mma iji ike ahụ niile na-abịa na ọdịda anyanwụ. Ọ ga-adị gị ka ịmụrụ anya mgbe ị kụsịrị ala, yabụ gịnị ma ị dabara na njem gị na mkpali ebumpụta ụwa a?
N'agbanyeghị mgbe ị rutere, ịgagharị ma ọ bụ ịkụ mgbatị ahụ nwere ike inyere gị aka ime ka ụzọ gị dị mfe ịbanye na mpaghara oge ọhụrụ. Ọzọ, ọmụmụ ihe ochie na ogbugbu hamsters: Na 1987, Dr. Nicholas Mrosovsky nke Mahadum Toronto kere mgbanwe oge awa asatọ maka otu ìgwè hamsters. Mgbe ọkara nke ụmụ anụmanụ na-ehi ụra, a manyere ọkara nke ọzọ ka ha gbanye mgbatị ahụ. N'ụzọ na-enye obi ụtọ, ndị na-emega ahụ nwere ụgwọ ọrụ dị ịrịba ama: Ha gbanwere, ná nkezi, na mpaghara oge ọhụrụ ha n'ime nanị ụbọchị 1.5 ebe ndị na-ehi ụra na-ewe ụbọchị 8.5 iji gbanwee. Ọ bụ ezie na emebeghị nnwale a n'ime mmadụ, mmega ahụ na-adị mma mgbe niile… Medical Daily chekwara ndụmọdụ kacha mma maka ikpeazụ.
Otu ndetu ikpeazụ: Ọtụtụ ndị njem na-ahụ ka ha na-efega n'akụkụ ọwụwa anyanwụ na-eme ka usoro ahụ dị njọ. "West kacha mma, ọwụwa anyanwụ bụ anụ ọhịa." Buru nke a n'uche ma jikere. Laa n'udo!